once - Synonyms of once | Antonyms of once | Definition of once | Example of once | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for once
Top 30 analogous words or synonyms for once
ဂျက်လီ ဂျက်လီသည် Shaolin Temple ဇာတ်လမ်းတွဲအပြင် The Once UponaTime in China၊ Fist
ဆေးဝါးဗေဒ 273. Indapamide = Natrilix SR 2.5 mg OD and 2.5-5 mg OD အရောင်လျှော့စေသည့် သွေးတိုးကျ ဆေး၊ 0.25 mg once as single dose in morning
ဆေးဝါးဗေဒ d. Benzathine penicillin G 2.4 million units IM onceaweek x3weeks ရက်တို ရူမက်တစ်ရောဂါ ကာကွယ်ရန်၊ ဆစ်ဖလစ် ပဌမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့် (အရေပြား၊ ဦးနှောက်မြှေး၊)၊ တတိယအဆင့် (အရေပြား၊ မျက်စိ၊ အရိုး၊ အစာလမ်း၊ အသက်ရှူလမ်း၊ နှလုံး၊)။
ဆေးဝါးဗေဒ 199. Enalapril (Maleate) = ACE inhibitor သွေးတိုးကျဆေး၊5mg OD and 5-40 mg in 1-2 doses နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ Initially 2-5 mg gradually increased to maintenance dose of 10-20 mg once or in divided doses ရေများများသောက်ပါ။
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ To date, the Saturn V is the only launch vehicle to transport human beings beyond low Earth orbit. A total of 24 astronauts were launched to the Moon, three of them more than once, in the four years spanning December 1968 through December 1972.
Enrique Iglesias Antonio Banderas, Salma Hayek နှင့် Johhny Depp နှင့်အတူ Robert Rodriguez ၏ Once UponaTime in Mexico တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅တွင် သူသည် ရုပ်မြင်သံကြားဟာသဇတ်လမ်း Two andaHalf Mon တွင် Carpenter / handyman အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၄ခုတွင် pepsiမှ evil Roman emperor တွင်တီးခတ်ခဲ့သည်။ သူသည် Tommy Hilfiger, Doritos နှင့် Vieroy နာရီများအတွက် စီးပွားရေးအရ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
တာလီမြို့ တာလီမြို့သည် ၈ ရာစုနှင့် ၉ ရာစုများတွင် ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သော နန်ကျောင်နိုင်ငံ(မြန်မာအခေါ် နန်းစော)နှင့် အေဒီ ၉၃၇-၁၂၅၃တွင်တည်ရှိခဲ့သော တာလီနိုင်ငံများ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ Situated inaonce significantly Muslim part of South China, Dali was also the center of the Panthay Rebellion against the reigning imperial Qing Dynasty from 1856–1863. It was severely damaged during an earthquake in 1925.
ဟေလီယိုစဖီးယား The solar wind consists of particles (ionized atoms from the solar corona) and fields (in particular, magnetic fields). As the Sun rotates once in approximately 27 days, the magnetic field transported by the solar wind gets wrapped intoaspiral. Variations in the Sun's magnetic field are carried outward by the solar wind and can produce magnetic storms in the Earth's own magnetosphere.